Muforoma inosangana nemaitiro ekuita zvinodiwa
Kugadzirwa kweforoma kazhinji kunosanganisira maitiro akati wandei sekugadzira, kucheka uye kupisa kurapwa. Kuitira kuona mhando yeforoma kugadzira uye kudzikisa kugadzirwa kwemitengo, izvo zvinhu zvinofanirwa kuve nehunyoro hwakanaka, machinability, kuomarara, harde ...
Nhanhatu Nheyo dzeMold Selection
1. Pfeka kuramba apo iro risina chinhu rakaremara muforoma mhango, inoyerera uye ichitsvedza pamwe nepamusoro pegomba, zvichikonzera kupesana kwechisimba pakati pechiso chegomba uye isina chinhu, izvo zvinoita kuti chakuvhe chikundikane nekuda kwekusakara. Naizvozvo, iyo yekupfeka res ...
ZveMotokari Kugadzira MuChina
Aojie anemhando yepamusoro yekugadzira tambo uye yakakwana mhando yekudzora system. Iyo kambani inyanzvi yekutengesa auto zvikamu muvhu muChina, inotora yepasirese kirasi CAD / CAM / CAE system; ruzivo rwese munharaunda yemuno runogona kuchinjaniswa nekugovaniswa; kugadzira chakuvhuvhu pamwe CNC m ...
Matatu Matanho Ekuumba Sarudzo Zvinhu
(1) Kuramba kuramba yemol ...
1. Pfeka kuramba apo iro risina chinhu rakaremara muforoma mhango, inoyerera uye ichitsvedza pamwe nepamusoro pegomba, zvichikonzera kupesana kwechisimba pakati pechiso chegomba uye isina chinhu, izvo zvinoita kuti chakuvhe chikundikane nekuda kwekusakara. Naizvozvo, iko kusakara ...